Zvakaita Georgia—Chitendero, Nyika, Vanhu
Vanonakidzwa chaizvo panguva yekukohwa mazambiringa
Nyika Georgia inozivikanwa nemakomo ainawo akakura ayo akaita zienda nakuenda anoita chando pamusoro pawo, uye mamwe acho akareba zvekudarika mamita 4 500. Ine zvikamu zvikuru zviviri, chekumabvazuva nechekumadokero. Chimwe nechimwe chezvikamu izvi chine nharaunda dzakati kuti dzine mamiriro ekunze, tsika, mimhanzi, matambiro, uye zvekudya zvakasiyana nezvedzimwe nharaunda.
Vanhu Pavagari vemuGeorgia vanosvika 3 700 000, vakawanda vacho vanhu vemarudzi emo.
Chitendero Vakawanda vacho vanotaura kuti ndevechechi yeOrthodox Christian. Vanhu vanenge 10 muzana vaMuslim.
Mutauro Mutauro wechiGeorgian hauna kana pawakambofanana nemitauro inoshandiswa nenyika dzakavakidzana neGeorgia. Nhoroondo inoratidza kuti mabhii anoshandiswa mumutauro wechiGeorgian ayo akasiyana neemimwe mitauro akagadzirwa makore anodarika 2 000 apfuura.
Zvinovararamisa Vakawanda vanoita zvekurima kuti vawane cheuviri. Kubvira munguva ichangobva kudarika, upfumi hweGeorgia huri kusimudzirwa zvakanyanya nevanhu vari kuishanyira.
Mamiriro Ekunze Chikamu chekumabvazuva kwenyika yacho chine mamiriro ekunze ari pakati nepakati. Kumhenderekedzo yeBlack Sea, iyo iri kumadokero kweGeorgia, kunopisa, kuchimbova neunyoro asi hakutonhori zvakanyanya, uye michero yakaita semaranjisi inobereka chaizvo.
Kukohwa mazambiringa munharaunda yeKakheti
Zvekudya Chingwa hachishayikwi pachikafu chakawanda chinodyiwa kuGeorgia. Chingwa cheko chakafanana nechimodho chinobikirwa muhovhoni yedhaka. Vanofarira kudya nyama ine muto wakakora wakagadzirwa nezvinhu zvinonhuwirira zvinoshandiswa pakukaringa. KuGeorgia, vakatanga kugadzira waini kubvira kare. Kugara nekugara, vanoisa waini mumidziyo yakakura yedhaka kuti ivire vobva vaichengetera imomo. Mhuri dzakawanda dzinorima mazambiringa uye dzinozvigadzirira waini. KuGeorgia kunowanika marudzi anenge 500 emazambiringa eko.
Magadziriro avanoita chingwa chavo chakaita sechimodho
VAPARIDZI MUNA 2016
RESHIYO, MUPARIDZI MUMWE PA
VAKAPINDA CHIRANGARIDZO MUNA 2016
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvakaita Georgia